​नैतिकता कुन चरीको नाम हो ? « Jana Aastha News Online
​नैतिकता कुन चरीको नाम हो ?
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७४, आईतवार १६:४३
कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामी संसदीय राजनीतिको कुरा गर्छौं तर त्यसको जननी बेलायत, फ्रान्सको उदाहरण हेरौं– के त्यहाँ पार्टीहरु मिलेर चुनाव लड्छन् ? कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, लक्ष्य र आचरण नै नमिल्नेहरुबीच चुनावी मोर्चा बनेको इतिहास छ त्यहाँ ? संसदीय अभ्यास असफल नबनोस् भनेर कुनै एक दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार बनाउन आवश्यक संख्याको लागि गठबन्धन हुनु स्वाभाविकै हो । तर, फरक विचारवाला पार्टीको नीति, झण्डा नै बोकेर अर्कै दलले चुनाव लडेको नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।
हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि कांग्रेस (आइ) को एकछत्र र लामो समयसम्म जारी अधिनायकत्व तोड्न भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) र वामपन्थीहरुले गठबन्धन बनाएका थिए तर यहाँको अवस्था त्यस्तो पनि होइन । त्यो त सत्ताविरुद्ध मोर्चाबन्दी थियो तर नेपालमा अचम्मै देखियो, सत्तापक्षले विपक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको । यो उदेकलाग्दो कुरा हो ।
शायद अहिले सत्तासीन दलहरु मूल्य, मान्यता र सैद्धान्तिक निष्ठाको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएको परिणाम भोग्दैछन् । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षीले आफूलाई जनताबीच निकट रहेको प्रमाणित मात्र गरेन कि सत्ता गठबन्धनलाई सफलतापूर्वक हराइसमेत दिएको छ । त्यसो त नैतिकता झन् कुनै, कतै देखिएन । ०७३ साउन १९ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिँदा विपक्षमा मत हालेका कमल थापा ६ महिनापछि सोही प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खान गएको पनि पाइयो ।